Nhazi ụlọ nchara n'ugbo n'èzí maka nnukwu ụlọ ọkụkọ 8x3x2m ụlọ ntu na griin haus | Winsom
Nhazi ụlọ ugbo nke n'èzí maka nnukwu ụlọ ọkụkọ 8x3x2m
Ibe 10-29 Ibe 30-49
Nkeji a dabara maka ọkụkọ na nkịta. Ezubere ụlọ anụ ụlọ nwere okpuru ulo na nkasi obi na nchekwa nke anụ ụlọ gị, ọ ga - enyere aka chebe anụ ụlọ gị ka mmiri ozuzo, snow, anwụ na ihe ndị ọzọ.
2) akwa oxford dị elu nwere mkpuchi PVC na mkpuchi mmiri 100% na nchekwa UV.
3) Metal hexagonal ntupu na plastic ọbọp.
Mahadum Oxford 420D
38*1.0mm galvanized ígwè tube
Nkeji a dị mma maka idobe ọkụkọ nke dị n'obere ụlọ na nnukwu azụ, na -egbochi ọkụkọ ịkpafu, na -enye nchekwa mmiri na anwụ ma na -echekwa ọkụkọ n'aka ndị na -eri anụ. Ọ bụ ezie na a na -ebu ọkụ n'obi ebu ogige a, ihe ndị ọzọ dị ka oke bekee, obere nkịta na ezi ezi ga -eme nke ọma. A na -eji ọkpọ galvanized eme ọkụkọ a ma na -egosipụta elu igwe na -adịgide adịgide iji hụ na nkwụsi ike nke ogige ahụ ka oge na -aga. Nke kadị mma, ọkụkọ gị ga -adị jụụ, kpọọ nkụ ma nwee ọ withụ na mkpuchi mkpuchi mkpuchi mmiri nke Oxford nke na -enye nchebe anyanwụ na -egbochi mmiri ozuzo. Ekwentị ọkụkọ dị arọ na -ekpuchi akụkụ, ọnụ ụzọ na elu ụlọ iji hụ na ọkụkọ enweghị ike ịgbanarị na igbochi ndị ọbịa a na -akpọghị. nchekwa. Ngwa ihe ọkụkọ ọkụkọ a na -abịa na ihe niile ịchọrọ iji wuo ogige ahụ, gụnyere ntuziaka ọgbakọ iji nyere gị aka site na usoro dị mfe.
Nrụpụta nchara na -adigide】 A na -eji mkpịsị nchara dị elu arụpụta pensụ ọkụkọ, nke siri ike nke na ọ dịghị mfe imebi ya, ijidesi ike n'ala mgbe a na -eji ya eme ihe n'èzí. N'akụkụ, nhazi ngwa-ngwa na-enye ohere ịtọ ntọala naanị n'ime nkeji
Cover Mkpuchi UV & Mmiri na-egbochi mmiri】 Chebe ọkụkọ gị ka ọ ghara ịdị na ihu igwe na ihe ndị dị n'èzí. N'elu ebe ọkụkọ na -agba nwere atụmatụ gbadara agbagọ, na -enye ohere ka mmiri, irighiri ihe na obere snow na -agba ọsọ ọsọ kama ịkpakọba, nke mere na coop anaghị enwe ihu igwe na ọ na -adịte aka.
Ọ dị mfe nhicha】 A na -etinye galị nke ọkpọkọ ka ọ na -eguzogide nchara ma dịkwa mfe idobe ọkụkọ gị gburugburu. Elu dị larịị na -adị mfe iji akwa mmiri ma ọ bụ ụfọdụ mmiri na -agba agba ehicha. Nkụkọ chick nwere oghere anaghị adabara gị naanị ịzụ ọkụkọ, kamakwa maka obere anụmanụ ndị ọzọ dịka oke bekee na ọbọgwụ wdg.
Net PVC hexagon steel net】 siri ike & dịgidere, kpaliri. obere oghere dị n'etiti meshes na -agbakwụnye nchekwa na ọnụ ụzọ nchara nwere mkpọchi nwere eriri mkpọchi na eriri na -enye ọkụkọ gị nnukwu nchekwa pụọ ​​n'aka anụ na -eri anụ.
Nke gara aga: Nnukwu ụlọ igwe na -agba ọkụkọ na -eje ije na ogige mkpuchi oke bekee anụ ụlọ ọkụkọ 6x3x2m
Osote: Akpa na -ere ere Pee akpa akpa nchekwa ekeresimesi
Nkpakọ ụlọikwuu Gazebo
Pop Up ụlọikwuu
Ụlọ ahịa Gosi ahia
Ụlọikwuu ịkpakọba adịchaghị adị 10x15ft (3 × 4.5m)
40mm Ụkwụ Profile Ọrụ Model ịkpakọba tent ...
Ogige ịkpakọba n'èzí nke 2x2m
Gazebo na -apịachi ya na akụkụ ya 3x6m
Ogige Omume nke Mpụga 3x3m
Nhazi Gazebo nke dị n'èzí 3x3m